အလွဲသုံးစားမှု စိစစ်စနစ် မှတ်တမ်း - ဝီကီပီးဒီးယား
အလွဲသုံးစားမှု စိစစ်စနစ် မှတ်တမ်း
အလွဲသုံးစား စိစစ်မှု အညွှန်း (ပင်မ | လတ်တလော စိစစ်မှုစနစ် အပြောင်းအလဲများ | ယခင်တည်းဖြတ်မှုများကို စစ်ဆေးရန် | အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း)
ဤမှတ်တမ်းသည် စိစစ်မှုများက ဖမ်းမိသော လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး၏စာရင်းကို ပြသပေးသည်။
ဆောင်ရွက်ချက်များ အားလုံးသိမ်းပြီးသော ပြောင်းလဲမှုများသာသိမ်းထားသော ပြောင်းလဲမှုများ မပါဘဲ
မည်သည့်အရာမဆိုRange-blockခွင့်မပြုစာတွဲပိတ်ပင်ဖမ်းချုပ်သတိပေးအလိုအလျောက်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းကို တားဆီးအုပ်စုများမှ ဖယ်ရှားNone
၁၃:၃၇၊ ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁: 8.38.148.212 (ဆွေးနွေး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:HpkJoj. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: New user userpage spam (test filter) (ကွဲပြားမှု)
၁၇:၀၃၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ဝီကီပီးဒီးယား:SOCK. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၇:၀၃၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ဝီကီပီးဒီးယား:HARDBLOCK. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၇:၀၂၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ဝီကီပီးဒီးယား:Blocking policy. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၇:၀၂၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ဝီကီပီးဒီးယား:PROXY. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၇:၀၁၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Ninjastrikers. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global) (ကွဲပြားမှု)
၁၆:၅၉၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:Nowy1993. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၆:၅၇၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Nowy1993. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၆:၅၅၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:Nowy1993. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၆:၅၂၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:Nowy1993. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၆:၄၇၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:Nowy1993. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၆:၄၅၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: Nowy1993 (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:Nowy1993. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၀၀:၄၂၊ ၁၅ ဇွန် ၂၀၂၁: 2600:1700:8100:89e0:25c4:8b0a:a760:c0c6 (ဆွေးနွေး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on English. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၆:၀၉၊ ၁၄ ဇွန် ၂၀၂၁: That Tun Aung That Tun Aung (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခန့်အပ်မှုများ. Actions taken: ခွင့်မပြု; Filter description: သက်ထွန်းအောင်
၁၆:၀၉၊ ၁၄ ဇွန် ၂၀၂၁: That Tun Aung That Tun Aung (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခန့်အပ်မှုများ. Actions taken: စာတွဲ; Filter description: Adding emoji unicode characters
၁၆:၀၈၊ ၁၄ ဇွန် ၂၀၂၁: That Tun Aung That Tun Aung (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခန့်အပ်မှုများ. Actions taken: ခွင့်မပြု; Filter description: သက်ထွန်းအောင်
၁၆:၀၈၊ ၁၄ ဇွန် ၂၀၂၁: That Tun Aung That Tun Aung (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ခန့်အပ်မှုများ. Actions taken: စာတွဲ; Filter description: Adding emoji unicode characters
၁၆:၂၂၊ ၁၃ ဇွန် ၂၀၂၁: 210.14.110.111 (ဆွေးနွေး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု. Actions taken: စာတွဲ; Filter description: Adding emoji unicode characters
၀၉:၂၆၊ ၁၁ ဇွန် ၂၀၂၁: 2400:ac40:601:bc10:e5cc:ffc4:d21d:3298 (ဆွေးနွေး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on မိဿ (ဗေဒင်). Actions taken: စာတွဲ; Filter description: Adding emoji unicode characters (ကွဲပြားမှု)
၀၆:၄၃၊ ၁၀ ဇွန် ၂၀၂၁: 210.14.107.120 (ဆွေးနွေး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ဂျိုးဇတ် စတာလင်. Actions taken: စာတွဲ; Filter description: Adding emoji unicode characters (ကွဲပြားမှု)
၀၄:၃၇၊ ၁၀ ဇွန် ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: သတိပေး; Filter description: new user youtube, &c.
၀၄:၃၇၊ ၁၀ ဇွန် ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
၁၇:၅၁၊ ၈ ဇွန် ၂၀၂၁: U KyawNyoThway (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ကျော်ညိုသွေး. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism
၁၇:၅၁၊ ၈ ဇွန် ၂၀၂၁: U KyawNyoThway (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ကျော်ညိုသွေး. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global)
၁၆:၀၈၊ ၆ ဇွန် ၂၀၂၁: 210.14.96.194 (ဆွေးနွေး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on ကူတော်ကျေးရွာအုပ်စု. Actions taken: ခွင့်မပြု; Filter description: Creating empty page
၂၀:၄၂၊ ၁ ဇွန် ၂၀၂၁: 37.111.9.202 (ဆွေးနွေး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့. Actions taken: ခွင့်မပြု; Filter description: သက်ထွန်းအောင်
၂၀:၄၂၊ ၁ ဇွန် ၂၀၂၁: 37.111.9.202 (ဆွေးနွေး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့. Actions taken: စာတွဲ; Filter description: Adding emoji unicode characters
၀၇:၂၃၊ ၂၉ မေ ၂၀၂၁: Buddha Bless The Burma (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on XXXTentacion. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: Antivandalism (global) (ကွဲပြားမှု)
၀၉:၄၉၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၄၈၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: သတိပေး; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၄၆၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၄၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: သတိပေး; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၄၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၄၁၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: သတိပေး; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၄၀၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၃၉၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: သတိပေး; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၃၁၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၃၀၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: သတိပေး; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၂၉၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
၀၉:၂၈၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: သတိပေး; Filter description: new user youtube, &c.
၀၈:၅၀၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: New user userpage spam (test filter)
၀၈:၄၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
၀၈:၄၄၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: New user userpage spam (test filter)
၀၈:၄၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: သတိပေး; Filter description: new user youtube, &c.
၀၈:၄၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: အမည်ညွှန်းမရှိ; Filter description: New user userpage spam (test filter)
၀၈:၄၃၊ ၂၇ မေ ၂၀၂၁: SanMyintTunFoodVlogger (ဆွေးနွေး | ပံ့ပိုး) triggered an abuse filter, performing the action "edit" on အသုံးပြုသူ:SanMyintTunFoodVlogger. Actions taken: ခွင့်မပြု, စာတွဲ; Filter description: new user youtube, &c.
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:AbuseLog" မှ ရယူရန်